किन सधैं चामल मागिरहन्छ कर्णाली? « AayoMail
किन सधैं चामल मागिरहन्छ कर्णाली?
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कर्णालीभरि १ लाख ७२ हजार ५ सय ५४ टन धान उत्पादन भयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको दाँजोमा यो परिमाण केही बढी हो। तर, अझै २५ हजार ४ सय २८ टन धान कर्णालीलाई अभाव छ।
अघिल्लो वर्षभन्दा ८ सय ८८ टन धान धेरै फले पनि त्यतिले कर्णालीलाई वर्षभरि खान पुग्दैन। त्यसका लागि त ३ लाख ५२ हजार १ टन धान चाहिन्छ।
आवश्कताका आधारमा आधामा कर्णालीमा उत्पादन हुन्छ। कर्णालीका १७ लाखभन्दा धेरै जनसंख्याले वार्षिक ३ लाख २६ हजार ५ सय ७३ टन धान खपत गरिरहेका छन्।
प्रदेशका १० जिल्लामध्ये तीनले मात्रै आफूलाई पुग्ने धान उत्पादन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छन्। रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत धान उत्पादनमा अघि छन्। अन्य जिल्ला भने आयातकै भरमा छन्।
कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका लागि भनेरै नेपाल खाद्य संस्थानले २८ हजार क्विन्टल चामल वीरेन्द्रनगरमा हाल तयारी अवस्थामा राखेको छ। दसैं–तिहारमा पूरै कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन संस्थानले उक्त मौजदात तयारी अवस्थामा राखेको हो।
‘साउनयता हुम्ला विमानस्थनमा चामलमात्रै १ हजार ५ सय क्विन्टल झरिसक्यो,’ संस्थानका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख भीम थापाले भने, ‘यसअघि २ हजार ५ सय क्विन्टल पठाइसकेका थियौं।’
थापाका अनुसार उक्त परिमाण हुम्ला विमानस्थल हुँदै कर्णालीका विभिन्न दुर्गम स्थानीय तहका डिपो पुग्छन्।
२०७६–७७ मा संस्थानले कर्णालीलाई मात्र १ लाख ५ हजार क्विन्टल चामल भित्र्यायो। जसमध्ये जापानबाट मात्र ३० हजार क्विन्टल भित्रिएको छ।
‘जापानबाट मात्र कर्णालीका लागि भनेर ३० हजार क्विन्टल चामल आएको छ। बाँकी नेपालकै अन्य भूभागबाट खरिद गरिएको हो,’ थापाले भने, ‘कर्णाली अझै धान–चामलमा आत्मनिर्भर हुन गाह्रो छ।’
आधा फलाउने कर्णाली : सधैं बेसाउनैपर्ने
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेतले मात्रै आफूलाई पुग्ने धान उपादन गरिरहेका छन्। बाँकी जिल्ला धानमा परनिर्भर छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७ सय ९५ टन धान उत्पादन गरेको हुम्ला प्रदेशमै सबैभन्दा कम धान उत्पादन गर्नेमा परेको थियो।
यसैगरी सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै ५१ हजार ५ सय ६७ टन धान उत्पादन भयो।
सल्यानमा २९ हजार ३ सय ७२, दैलेख २४ हजार २ सय ५४, जाजरकोट ९ हजार ९ सय ७१, कालिकोट ७ हजार ८ सय ५१, जुम्ला ५ हजार ७ सय, मुगु ५ हजार ३ सय ६, डोल्पा ८ हजार ७ सय ७५ र रुकुम पश्चिममा २८ हजार ९ सय ६३ टन धान उत्पादन भएको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ।
कर्णालीमा आवश्यक धान त्यहीँ उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। आवश्यकताको आधामात्र उत्पादन भइरहेको छ।
यता, कृषि विज्ञ छवि पौडेल भने कर्णालीले रैथाने बाली उत्पादन गर्न सके खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने धारणा राख्छन्।
‘कर्णालीलाई भाते बानी परेको छ । बिहान–साँझ भातमा निर्भर छन्। तर, भातलाई नै विस्थापित गर्ने गरी हाम्रा रैथाने अर्गानिक उत्पादनलाई बढावा दिनसकेका छैनौं,’ उनले भने।
उनका अनुसार कर्णालीमा भातलाई विस्थापित गर्नसक्ने कागुनो, चिनो, फाफरलगायत बालीमा अनुसन्धानको आवश्यकता छ। यसलाई विस्तार गर्न सक्ने हो भने कर्णालीमा खाद्य अवस्था बदलिने छ।
‘किसानलाई सबै थाहा छ। उनीहरूलाई आवश्यक भनेको उत्पादनमा थप सुदृढीकरण ल्याउनु हो,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई प्राविधिक ज्ञानलगायत खाँचो छ। अझ भन्नुहुन्छ भने, राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिले किसान र कृषिलाई बुझ्न सकेका छैनन्।’
‘नाममात्रैको कृषि अनुसन्धान’
कृषि विकासको लागि स्थापना भएको कृषि अनुसन्धान केन्द्र नाममै सीमित भएको कृषि विज्ञ छवि पौडेलको धारणा छ।
खाद्य अवस्थामा कर्णालीको वर्तमान स्वरूप बदल्न सम्भावना रहे पनि कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू किसानसमक्ष जान नसकेको उनको आरोप छ।
‘कर्णालीलाई भाते बानीबाट छुटाउन रैथाने उत्पादनमा बल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा अनुसन्धान केन्द्रहरूले रैथाने बाली संरक्षण गर्नुपर्छ।’
उत्पादनका लागि लगानीका साथै किसानसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। कर्णालीका रैथाने बालीलाई सम्बन्धित निकायले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।